Kooxaha Chelsea iyo Arsenal oo bar baro ku kala tagay +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Kooxaha Chelsea iyo Arsenal oo bar baro ku kala tagay +SAWIRRO
Kooxaha Arsenal iyo Chelsea ayaa xalay garoonka Staform Bridge kuwada ciyaaray kulan aad u xiisa badnaa oo ka tirsanaa wareega 4 dhamaadka tartanka Carabao Cup.
Kulanka ayaa daqiiqadihii loogu talagalay ku soo idlaaday barbaro 0-0 oo labada kooxood aysan wax goolal iska dhalin laakiin guud ahaan kulanka waxaa jiray fursado goolal loo filan karay oo labada dhinac ay qasaariyeen.
Inta ay socotay qeybtii hore ee kulanka Chelsea ayaa lumisay fursadii ugu qaalisaneyd kulanka markii ciyaariyahanka xulka Nigeria ee Victor Moses uu ku dhawaaday in uu gaaro goolka Arsenal laakiin isku daygaasi ayaa noqday mid qasaaray.
Qeybtii labaad ee kulanka ayaa bilaabatay laakiin labada kooxood ayaa sii watay weerarada aan natiijada lahayn oo ay isku qaadayeen daqiiqad walba oo kulankaasi kamid ahayd mana jirin koox ka faaideysata fursadaha soo maray Chelsea waxay sameysay 21 isku day halka Arsenal ay sameysay 8 isku day.
Wilshere oo si joogto ah u soo ciyaarayay kulamadii ugu danbeeyay ayaa u muuqday mid ay jugi soo gaadhay oo aan sii ciyaari karin, waxayna xidiga ree England u ahayd xaalad kale oo murugo leh maadaama oo uu si aad u fiican u soo ciyaaray kulamadii ugu danbeeyay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro gool la’aan ah taas oo natiijo fiican u ahayd kooxda uu Arsene Wenger ka ganaaxnaa ee Arsenal oo kulanka Emirates Stadium haysata fursad fiican oo ay ugu soo bixi karto finalka EFL Cupka iyada oo ciyaartoy dhaawac kaga maqan iyo Wenger-ba dib u heli doona,waxayna Conte iyo kooxdiisa ku ahayd natiijo ayna doonayn.